Umaki: izinkomba zebhizinisi | Martech Zone
Umaka: izinkomba zebhizinisi
Izinkomba zasendaweni zingaba isibusiso nesiqalekiso emabhizinisini. Kunezizathu ezintathu ezibalulekile zokunaka izinkomba zasendaweni: Ukubonakala Kwemephu ye-SERP - izinkampani azivami ukubona ukuthi ukuba nebhizinisi newebhusayithi akusho ukuthi kukwenze ubonakale emakhasini emiphumela yenjini yokusesha. Ibhizinisi lakho kufanele libhalwe ku-Google Business ukuze libonakale esigabeni semephu sekhasi lomphumela wenjini yokusesha (SERP). Izikhundla ze-Organic - izinkomba eziningi
NgoLwesithathu, Septemba 16, 2020 NgoLwesibili, Septhemba 15, 2020 Douglas Karr
Ukuhlanganiswa akulula kakhulu phakathi kwezinsizakalo amabhizinisi akho amancane awadingayo namapulatifomu atholakalayo. Ukuze i-automation yangaphakathi kanye nokuhlangenwe nakho kwamakhasimende okungenamthungo ukusebenza kahle kungaba ngaphandle kwesabelomali kumabhizinisi amaningi amancane. Amabhizinisi amancane adinga ukusebenza okuvula amapulatifomu amaningi: Iwebhusayithi - iwebhusayithi ehlanzekile elungiselelwe ukusesha kwasendaweni. Isilayezi - ikhono lokuxhumana ngempumelelo nangendlela elula ngesikhathi sangempela namathemba. Ukubhuka - ukuhlela ukuzisebenzisela ukukhansela, izikhumbuzo, kanye